२४ घन्टाभित्र उप-प्रधानमन्त्री, राजेन्द्र महतोलाई देश नि’काला गर्न माग (विज्ञप्ति सहित हेर्नुहोस)
उप-प्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई देश नि’काला गर्नुपर्ने माग ग’रिएको छ । शनिबार नयाँ पार्टी, नेपाल काम चलाउ सरकारमा सह’भागी भई उच्च ओहोदामा आसिन महतोलाई देश निका’ला गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।
पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महतोलाई २४ घण्टाभित्र उप-प्रधान एवं सहरी विकास मन्त्रीबाट निलम्बन गरि निजको नागरिकताको सम्ब’न्धमा परेको उजुरी उपर ‘छानविन गरी आवश्यक कार’बाही गरि देशद्रोही अभिव्यक्ति दिएकोमा राज्यद्रोह मुद्धा लगाई देश निका’ला गर्नसमेत सरकारको ध्याना’कर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
यदि सरकारले उक्त कदम नचा’लेको खन्डमा जनताले आवश्यक कार’बाही गर्ने र त्यसको जिम्मा सम्बन्धित पक्षले नै लिने पर्ने पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता युवराज सफल हस्ता’क्षर विज्ञप्तिमा जनाएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत वर्त’मान सरकारको वैधानिकता सम्बन्धमा मुद्धा परिसकेको अवस्था’मा सरकार विस्तार गर्नु संविधानको मर्म र भावना विप’रित कदम रहेको पनि पार्टीको ठहर छ ।
साथै, असंवैधानिक रुपमा संसद विघ’टन गरि निर्वाचन समेत घो’षणा गरिसकेको अवस्था’मा मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पार्टीले गम्भी’र आ’पत्ति जनाएको छ ।
सप’थमा के भनेका थिए महतोले ?
हाम्रासामु दुईवटा का’र्यभार छन् । एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यभार छ भने भविष्यको कार्यभा’र भनेको यो देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दो’लनको तयारी गर्नु हो ।
यो देशमा अधिकार र पहि’चानको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य लक्ष्य हो । यस्तै, सुशासन र समृद्धिलाई अ’गाडि बढाउने हो । बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा नेपाललाई स्था’पित गराउने हो । नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, बहुल राष्ट्रिय राज्य हो । पार्टीको मूल लक्ष्य यो रहेको छ ।
बहुरा’ष्ट्रिय राज्यको अर्थ ?
बहुराष्ट्र भन्नुको अर्थ दुई वा दुई भन्दा बढी राष्ट्र अर्थात् एउटै देशभित्र धेरैवटा राष्ट्रियताको क’ल्पना बहुराष्ट्रिय राज्यमा समेटिए हुन्छ । शुक्रबार सपथ ग्रहणका क्रममा यहीँ शब्द महतोले उच्चा’रण गरेका छन् । न्युज24 बाट